ယောင်းတို့ရဲ့ဆံသားလေးတွေကျန်းမာနေဖို့ ပျားရည်ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။ - For her Myanmar
ဆံပင်တွေက အမြဲတမ်း မွဲခြောက်ခြောက်နဲ့မို့ စိတ်တိုင်းမကျတွေဖြစ်နေလား။ ဘယ်ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ဘယ်ပေါင်းဆေးကိုသုံးသုံး တိုးတက်မလာတဲ့ ဆံသားအခြေအနေအတွက် အဖြေရှာနေပါသလား။ ပျားရည်လေးသုံးပြီး ဒီလိုလေးလုပ်ကြည့်ပါလားယောင်းတို့ရေ...
ယောင်းတို့တွေကလေ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆို အသစ်ထွက်သမျှ product အသစ်တွေနောက် လိုက်တတ်ကြတယ် မဟုတ်လား။ ချက်ချင်းသိသာတယ်ဆိုတဲ့ productတွေဆို ပိုစိတ်ဝင်စားတတ်တယ်မဟုတ်လား။ တည့်ရင်တော့ ကောင်းပါရဲ့။ မတည့်များမတည့်ခဲ့ရင် ဆံသားလေးတွေပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ ယောင်းတို့ဟာ တစ်ခါတလေ လှချင်စ်ိတ်နဲ့ ဖြောင့်စက်ဆွဲတာ၊ ပျော့ဆေးတွေနဲ့ ဆံပင်ပျော့အောင်လုပ်တာ၊ ဆံပင်ဆေးဆိုးတာလုပ်တတ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ ဒါတွေက ဆံသားကိုပြင်းထန်တဲ့ chemical တွေနဲ့ထိတွေ့စေပါတယ်။ ပုံမှန်ခေါင်းလျှော်ပြီး dryerမှုတ်တာတောင်မှ ဆံသားခြောက်သွေ့ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ။
Related Article >>> ရှည်လျားတဲ့ဆံနွယ်တွေကို အမြဲလှနေစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်(၇)ချက်
ကဲ ဒါဆို ဘာတွေဘယ်လိုသုံးပြီး ဆံသားလေးတွေကိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ???
သဘာဝကုထုံးတွေက ယောင်းတို့ရဲ့ဆံသားလေးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါ။ ဆံသားအတွက်လိုအပ်တဲ့ သဘာဝအာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ ဒိန်ချဉ်၊ ကြက်ဥအစရှိတာတွေနဲ့လည်း လှပတဲ့ဆံသားတွေရဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေ ပြောပြထားပြီးပြီဆိုတော့ ဒီတစ်ခါ ပျားရည်လေးသုံးပြီး ထိန်းသိမ်းကြည့်ကြရအောင်နော်။ ပျားရည်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ အများကြီးပါ။ ပျားရည်ဟာ အေးမြတဲ့သဘောသဘာဝရှိပြီး ဆံသားတွေရဲ့အစိုဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိတွေ အမြောက်အမြားပါဝင်တဲ့အတွက် ဆံသားလေးတွေပြတ်ထွက်တာတို့ ဆံပင်ကျွတ်တာတို့ကို လျှော့ချပေးပြီး ယောင်းတို့ရဲ့ဆံသားလေးတွေ သန်စွမ်းကျန်းမာအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ပျားရည်မှာ anti-baterial ဂုဏ်သတ္တိလည်းပါဝင်တာကြောင့် ဦးရေပြားယားယံခြင်း၊ အနီကွက်နဲ့အဖုအပိမ့်ဖြစ်ခြင်းများကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပြီး ဆံပင်ပြန်ပေါက်လာဖို့လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီလိုအကျိုးအာနိသင်တွေကြောင့် ပျားရည်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့သဘာဝကုထုံးတွေကို hair spaတော်တော်များများမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်။
Related Article >>> ဆံနွယ်လေးတွေကို အိစင်းစေမယ့် သဘာဝသစ်သီးဆံပင်ပျော့ဆေး(၄)မျိုး
ပျားရည်ကို ယောင်းတို့ရဲ့ဆံသားလေးတွေအတွက် ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ??
ကိုယ်တိုင်လုပ် ပျားရည် hair maskလေးတွေဟာ လုပ်ရတာလွယ်ကူပါတယ်။ ပျားရည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေဝယ်မယ့်အစား အကျိုးရလဒ်ပိုကောင်းတဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ်maskလေးတွေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ရတာအရမ်းလွယ်ကူတဲ့ honey hair maskလုပ်နည်း နှစ်မျိုးကို ပြောပြမယ်နော်။
၁။ ပျားရည်နဲ့ဒိန်ချဉ် hair mask
ဒိန်ချဉ်က ဆံသားလေးတွေကို အားဖြည့်ပေးရုံသာမက မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းအာဟာရပါဝင်ပါတယ်။ ပျားရည်ကတော့ ဆံသားလေးတွေကို တောက်ပစေပြီး ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်းလေးဖြစ်နေစေပါတယ်။ ဆံသားညိုမွဲခြောက်သွေ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ hair maskလေးမှာ ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့
ဒိန်ချဉ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ ဇွန်း
တို့ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်နည်းလေးကတော့ ပျားရည်နဲ့ဒိန်ချဉ်ကို သေချာသမအောင် ရောမွှေပါ။ ပြီးရင်တော့ applicator သို့မဟုတ် ခေါင်းဘီး သို့မဟုတ် ယောင်းတို့ရဲ့လက်ကလေးတွေနဲ့ ဦးရေပြားအနှံ့ကောင်းစွာနှိပ်နယ်ပေးပါ။ ဆံပင်အရင်းထိနေရာတိုင်းရောက်ပါစေနော်။ ပြီးရင်တော့ သဘက်သန့်သန့်လေးတစ်ခုနဲ့ ဆံပင်ကိုပေါင်းထားပြီး မိနစ်၃၀လောက်ထားပေးပါ။ အချိန်ပြည့်ရင် ရေဆေးချလိုက်ပြီး ခေါင်းကို dryerတွေမသုံးပဲ သေချာခြောက်သွေ့အောင်သုတ်လိုက်ပါ။ ဦးရေပြားလေးအေးပြီး ယောင်းတို့ရဲ့ဆံသားလေးတွေ အိအိလေးဖြစ်နေမှာပါနော်။
၂။ ကြက်ဥနဲ့ ပျားရည် hair mask
ယောင်းတို့စားနေတဲ့ကြက်ဥမှာ ဗီတာမင်နဲ့ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အပြင် ကြက်ဥနဲ့လုပ်တဲ့ hair maskဟာ အကောင်းဆုံးတွေထဲက တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ ပျားရည်နဲ့တွဲဖက်လိုက်တော့ ပိုကောင်းသွားပြီပေါ့။ ဒီ hair maskလေးမှာ ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့
– အုန်းဆီ သို့မဟုတ် သံလွင်ဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်းခွဲ
– ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်း
– ကြက်ဥ ၃လုံး
တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး ကြက်ဥနဲ့ သံလွင်ဆီကို အတူတူမွှေပေးပါ။ ပြီးရင် ပျားရည်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းစီထည့်ပြီး သမအောင်ရောမွှေပေးပါ။ အကုန်မွှေပြီးရင်တော့ သုတ်လိမ်းပြီး သဘက်သန့်သန့်လေး ဒါမှမဟုတ် ရေချိုးဦးထုပ်နဲ့အုပ်ထားပေးလိုက်ပါ။ တစ်နာရီလောက်ပေါင်းထားပြီးရင်တော့ ကြက်ဥအနံ့တွေပျောက်သွားအောင်နဲ့ အဆီတွေကုန်သွားအောင် ခေါင်းလျှော်ရည်အပျော့လေးနဲ့ သေချာခေါင်းလျှော်ချလိုက်ပါ။ ယောင်းတို့ရဲ့ဆံသားလေးတွေ နူးညံ့တောက်ပပြီး သန်စွမ်းတဲ့ဆံကေသာအဖြစ် ပြောင်းလဲလာမှာပါနော်။
ကဲ.. ဒါဆိုရင် အခုပဲ ယောင်းတို့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ တောက်ပတဲ့ဆံကေသာလေးတွေအတွက်နဲ့ ဆံသားလေးတွေ ပြန်လည်စိုပြည်ကျန်းမာလာဖို့ အိမ်မှာအလွယ်တကူရရှိနိုင်တဲ့ honey hair maskလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြုစုလိုက်ပါ။ လှပတဲ့ ဆံကေသာပိုင်ရှင်လေးများ ဖြစ်ကြပါစေနော်။
Amber (For Her Myanmar)
Nilar July 25, 2017